Faahfaahin ku sabsan kulankii uu Madaxweynaha la qaatay 18-Safiir ee ka dhacay Muqdisho(Daawo Sawirada)	| Salaan Media
Home Wararka Faahfaahin ku sabsan kulankii uu Madaxweynaha la qaatay 18-Safiir ee ka dhacay...
Faahfaahin ku sabsan kulankii uu Madaxweynaha la qaatay 18-Safiir ee ka dhacay Muqdisho(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu maanta Magaalada Muqdisho kula kulmay wafdi ka socday Midowga Yurub oo uu Hoggaaminayey Guddoomiyaha guddiga amniga iyo siyaasadda ee ururkaas Olof Skoog.
Kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ka dhacay Xeradda Xalane iyadoona uu Madaxweyne Xassan Halkaasi kula kulmay Wafdiga oo ka koobnaa 18 safiir oo ka socday Midowga Yurub.
Wafdiga 18 safiir ayaa madaxweynaha kala hadlay xiriirka EU iyo Soomaaliya, sida loo xoojin karo dadaallada Midowga Yurub uu Soomaaliya gacan ugu siinayo sidii nabad buuxda looga dhalin lahaa iyo kaalmooyinka kale ee aadanimo ee ay dalka siiyaan.
Kulanka marka uusoo idlaaday kadib, ayaa waxaa Saxaafadda meel fagaara ah kula hadlay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in wafdiga ay isla soo qaadeen arrimaha ammaanka iyo siyaasadda dalka waqti xaadirkan, isagoo intaas ku daray in sidoo kale ay ka arrinsadeen waxa dowladda u qabsoomay iyo caqabadaha ay wajaheyso.
Waxa uu Madaxweyne Xassan Sheegay in Somalia ay Caalamka irdaha u fureen, isla markaana sida loogu jajaban yahay ay uga faa’iideystaan, isagoona Rajo ka muujiyay Kulankii manta uu la qaatay Madaxdaasi.
Dhanka kale, Wuxuu madaxweynuhu ka dhawaajiyey in Midowga Yurub uu kaalin wax ku ool ah ka qaatay ka bixitaankii dalka ee waqtigii ku meel gaarka, dhismaha hay’adaha dowladda iyo in mucaawinooyin joogto ah siiyaan Soomaaliya.
Ugudambeyntii, waxa uu sheegay in Somalia ay heysato Fursado badan ka faa’iideysigeedana looga baahan yahay Muwaadiniinta Dowladuna ay bixin doonto Juhdi ballaaran oo indhaha Caalamka loogu soo jeedinaayo Somalia, isagoona ugu baaqay Umadda soomaaliyeed inay gurtaan mirihii 22-Sanno aysan guran.
Xafiiska Shabakada Salaanmedia .com